Somaliland: Abaar iyo biyo la’aan saameysay nolosh oo ka jirta Deegaanka Dacarta iyo dawladda oo dayacday – Qaranimo Online
You are here: Home 2015 October 26 Somaliland: Abaar iyo biyo la’aan saameysay nolosh oo ka jirta Deegaanka Dacarta iyo dawladda oo dayacday
Somaliland: Abaar iyo biyo la’aan saameysay nolosh oo ka jirta Deegaanka Dacarta iyo dawladda oo dayacday
| Maamulka Degmada iyo Madaxda dawlada ugu jira deegaanka oo lagu dhaliilay Mashaariic afar sannadood qabyo ah oo bulshadu ku hungowday…
Hargeysa | October 26, 2015 – Abbaar iyo biyo la’aan baahsan, ayaa ka jira Deegaamada hoos-yimaada Degmada faro-weyne oo ka tirsan Gobolka Maroodi-jeex, taasoo ay meelaha qaar u dheertahay baahiyo dhanka adeegyada bulshada ee aasaasiga ah oo aad u liita.
Deegaamada ugu daran ee ay abaartusaameysay waxa kamida Deegaanka Dacarta oo kamida deegaamada ugu balaadhan degmada, halkaasoo abaartu ay marayso heer ay xooluhu u dhintaan cunto la’aan, dadkuna halis ugu jiraan haraad iyo gaajo, sida ay sheegeen Maamulka iyo Wax-garadka Deegaanku.
Deegaankan oo ay aad ugu yaraayeen roobabkii Gu’gu, una badan xoollo dhaqato iyo beeralay, ayaa wax taakulo ah aan ka helin Dawladda iyo Hay’addaha gargaarka toona, waxaanay Dadka deegaanku intaa ku dareen in dalagii beeruhu ka ba’ay sanadkan markii biyo ku filan uu waayey, xoollaha Adhiga iyo lo’duna bilihii u dambeeyey waajaheen xaalad dhimasho.
“Adhiga iyo lo’du iminkay bilaabeen inay bakhtiyaan gaajo darteed, geelluna wuu ku daba jiraan haddaan alle faraj nala soo gaadhin, dee dadkuna waa xigayaa”sidaas waxa Wariyeyaal socdaal indho indhayn ah ku tegay u sheegay Cismaan oo kamida Odayaasha Deegaanka.
Waxa uu intaas ku daray “abaartani waa tii ugu adkayd ee taariikhda inta la xasuusto na soo martay, meeshina marka horeba may lahayn ilo-biyoodyo kayda oo marka roobku yaryahay cirka dambe lagu baxnaaniyo. Waxa ku yaalla dhaam weyn oo loogu talo-galay inay degmada oo dhami ka faa’idaysto oo ay Hay’addi qoday, nasiib daro isagoo kala badh maraya ayey hay’adii joojisay qodistiisii ilaa hadana cid u dhaqaaqday dawlad iyo Hay’ad toona ma jirto” .
“berkeddo ma leh oo waa dhul bus ah oo aan berkedo ka qodmayn, markaa walaahi halisbaanu ku jirnaa illaahay mooyee cid noo maqan ama wax noo balanqaaday oo aanu sugaynaa ma jirto”ayuu Cismaan hadalkiisa ku daray.
Cabdiwahaab Maxamed Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka ayaa sheegay inaanay dawladdu waxba ka qaban baahiyaha bulshada deegaankan , sidii dalka loo soo galay, marka laga yimaado Dugsi saddex qol ah oo halkaa laga dhisay.
Guddoomiyaha tuulada laga xukumo deegaankan Cabdi Cabdilaahi Yey (Cabdi Rows), ayaa sheegay in baahida ugu daran ee deegaankan ka jirtaa ay tahay biyo la’aan nolosha dadku halis daaqayso iyo adeegyadii dhanka Caafimaadka oo aan haba-yaraatee ka jirin, taasoo uu sheegay inay u sii nuglaysay duruufaha dabeeciga ah ee ku habsaday. “iminka waxa noogu daran biyo la’aan, dadku beerkuu dhulka ku hayaa, xoolihii waxay afka saaraan ma haystaan, dadkuna waxba kuma noola”.
Haydh-tuulaha Deegaanka Dacartu waxa kale oo uu tilmaamay “xarun Caafimaaad ma lihin, gaadiid aanu qof hadii sakaraado dhakhtar ugu qaadno ma haysano, Dumarku markay fooshu qabato waa in Hargeysa loo qaado ama faro-weyne, meelahaasna gaadiid lagu gaadhsiiyo ma haysano, kolkaa xaaladdayadu waa sidaas baahi wax noo dhiman garan mayno, Dawlad iyo cid kale toona oo gurmad aanu ka helnay ma jiraan” ayuu yidhi.
Gudoomiye Cabdi Rows, waxa uu ugu dambeyn dawladda ugu baaqay in gurmad deg deg ah lala soo gaadho. “dawladda waxaanu ugu baaqaynaa in naloo soo gurmaddo ilaahaybaa gurmad lehe. Waliba waxaanu codsanaynaa biyo iyo adeeg Caafimaad, si nolosha dadka loo badbaadiyo illaahaybaa wax badbaadiyee”ayuu baaqiisa ku sheegay.
Ex-Xildhibaan Cabdixakiim Maxamed Xuseen qasbaaye (Xayle), oo ka tirsanaa Golihii hore ee deegaanka Hargeysa oo xubin ka ahaa wefti xaqiiqo raadin u tegay deegaankaas oo isugu jira aqoonyahano, masuuliyiin iyo waxgarad, ayaa dawladda iyo Hay’adaha caalamiga ah ee dalka ku sugan ugu baaqay inay taakulo deg-deg ah la soo gaadhaan mujtamaca ku dhaqan Deegaankaas iyo nawaaxigiiisa.
Xildhibaan hore Xayle Qasbaaye, ayaa ku canaantay masuuliyiinta Dawladda ku jira ee ka soo jeeda Deegaankan, inay indhaha iyo dhegaha ka furaysteen dayaca iyo dar-xumada haysata deegaanka, isagoo xusay in baahiyaha nololeed ee ka jira jiidaas hadaan dhakhso gurmad qaran loogu waajihin ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo miisaankeeda lehi.
Geesta kale, xubno isugu jira Odayaasha iyo waxaradka deegaanka oo la hadlay wariyeyaasha, ayaa xukuumadda ugu baaqay inay u soo jeesato baahiyaha ka jira degmada, khaasatan deegaankan Dacarta oo ay ku dooddeen inuu kamid yahay deegaamadii xisbiga talada haya ee Kulmiye codka ugu badan ka helay doorashooyinkii madaxtooyada, Baarlamanka iyo Deegaamada.
Waxa ay si gaar ah uga dalbadeen xukuumadda inay dhamaystirto laba mashruuc oo halkaa laga bilaabay saddex sannadood ka hor, kuwaasoo wali qabyo ah, isla markaana mid ka mida oo ah MCH ama xannaano loogu talo-galay caafimaadinta Hooyada iyo Dhalaanka oo uu wasiirka Caafimaadka Saleeban Xaglo-toosiye dhagax dhigay sanadkii 2013-ka aan halkii laga qaadin.
Mashruuca labaad ee qaybada ah, ayaa ah Dhaam-biyood hay’adda WFP halkaa ka qoday afar sannadood ka hor oo markii uu kala badh marayey istaagay , kaasoo ay sheegeen in cid ka daba tagtay iyo dawlad kula xisaabtantay hay’adii waday toona aanay jirin.
Ugu dambeyn odayaasha Deegaanka Dacartu waxay sheegeen inaanu Maamulka degmadu u dhego nuglayn wax ka qabashada baahiyahooda daruuriga ah, degmaduna kamid tahay kuwa ugu liita xagga horumarka Gobolka ay ka tirsantahay ee Maroodi-jeex, taasoo ay ku dhaliileen Madaxda degmada iyo kuwa Gobolka ay hoos-tagto.
How the Rich Look Down on Migration November 19, 2015
Faroole oo ka tanaasulay musharaxnimadiisa February 7, 2017
AMISOM oo aqbashay inay ka guurto garoonka Muqdisho Stadium June 11, 2016
Shaqaalihi diyaaraddii Dhacday oo loo duulinayo dalkooda October 17, 2015
NUSOJ condemns the killing of a prominent journalist in Mogadishu September 27, 2016
Omar navigates rising political celebrity as she adjusts to life in Minn. Legislature February 21, 2017
Shariif Xasan oo Mooshin laga geynayo baarlamaanka K/galbeed January 24, 2016
Isbedel-ka iyo saami qeybsiga degmooyinka Gobolka Benaadir May 23, 2017
Go’aamo ka soo baxay Shirka Golaha Wasiirrada March 1, 2016
Taliyihii hore ee Nabadsugida Garoonka diyaaradaha Muqdisho oo ka war-bixiyay ammaanka garoonka February 10, 2016